2016 avril 13 | Région Boeny
Daily Archives: 13 avril 2016
250 hatramin’ny 300 ha ny velaran’ala ripalka atao saribao isan-taona eto Boeny araka ny antontan’isa nomen’ny Talem-paritry ny Tontolo iainana sy ny Ekolojia, ny Ranomasina ary ny Ala (DREEMF) eto an-toerana, Rtoa Rakotoarimanana Josette. Efa manaonao foana ireo mpanao saribao ankehitriny hoy kosa ny Ben’ny Tanànan’Ambondromamy vaovao, fa tato anatin’ny valo taona izao dia ripaka
“Fahatokisan’ny mpiara-belona ny zandary, no tanjona ezahinay apetraka” Hoy ny Komandin’ny CIRGN Mahajanga, ny Kly Mananga Jean Manasse raha niara-nankalaza tamin’ireo namany manerana ny Nosy ny andron’ny 01 aprily ny Zandarimariam-pirenena teto Mahajanga ny zoma lasa teo, tao amin’ny toby Kolonely Jean Philippe Mahajanga be. Filaharana namakivaky ny tanàna niarahan’ireo zandary am-perinasa eto an-toerana sy
29 martsa teto Mahajanga: ny tantara tsy fanadino hoy ireo Bekotromaroholatra
Fitoam-pivavahana iraisam-pinoana tao amin’ny EKAR Mahabibo, nanandratana vavaka ho an’ny Tanindrazana, fametrahana fehezam-bonikazo teo anoloan’ny 29 martsa 1947 teo Mahabibo. Fampiratiana ireo sary mirakitra tantara nialohavana hira sy tonokalo manindrahindra ny fitiavan-tanindrazana ary fandefasana horonan-tsary, tao amin’ny Tranoben’ny Kolotsaina Mahajanga, nampitamberina ireo ady natrehan’ireo mpitolona mahery fo. Ireo no hetsika notanterahana teto andrenivohitr’I Boeny nankalazana